Sao mba voafitaka isika ?? – MyDago.com aime Madagascar
Sao mba voafitaka isika ??
Vita soa aman-tsara indray iny ny tany Sandton, Afrika Atsimo. Samy manana ny fomba fandikàny iny fanambarana nataon’ny SADC iny avokoa ny rehetra… Ny zavatra azoko lazaina dia tsotra, fandrebirebena ny sain’ny vahoaka Malagasy ary fitaka be nataon’ny SADC ho an’ny Filoha Ravalomanana sy ny mpitaky ny ara-dalàna ireny fanambarana ireny.
Voalohany, efa fantatry ny SADC tsara fa ny HAT tsy hanaiky ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana izany mihitsy ary hanao be marenina sy baroa hatramin’ny farany. Ny nataony hoy ianao ?! Nekeny ny sori-dàlan’i Simao ary lazainy fa hasiana fanovàna. Io « fanovàna » lazain’ny SADC io dia tsy tokony ho adinoina fa TSY MAZAVA mihitsy…na aleoko ataoko mihitsy hoe iniana tsy atao mazava.
Faharoa, terena hanao sonia io sori-dàlana io ny Ankolafy 3 ary midika izany fa atao ho tompon’andraikitra ireo raha sanatria ka tsy vita ny sonia…
Fehiny, raha mbola ny HAT no eo dia tsy ho tafody eo izany mihitsy ny Filoha. Ny azo atao dia ny manamafy ny fitoriana any @CPI na midina an-dalam-be. Raha ny SADC sy ny Union Européenne no andrasana eo dia sahirana hiodina avia sy havanana eo foana isika mianakavy na manana ny rariny toy inona aza.
Auteur MpitsokaPublié le 15 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique
7 réflexions sur « Sao mba voafitaka isika ?? »
Mpitsoka a, sao mba adinonao kosa hoe rehefa vita ny fanitsiana vao alefa ny fanaovan-tsonia rehetra? Sa diso ny fandraisako ny raharaha?
antifat dit :
alao hery reo olona fa lera zao ozy deba a!!
aza taitaitra izany isika, misy antony daholo ny zava-drehetra. Efa fantatry Andry R. io fanapahan-kevitra noraisin’ny SADC io, ary ny rehetra tany dia mahafantatra tsara ny fanovana tsy maintsy hapetraka ao anatin’ny FR Simao. Fa ny olana dia ny mpanolotsaina azy taty indray no nilaza fa tokony hotsipahina io satria nivaona tamin’ny promesse efa nomeny ry Chissano sy Simao izay efa fantatra ny asa nampanaovina azy. Tadidio fa efa tamin’ny taon-dasa nandalovany farany teto ingahy Chissano no efa nilaza fa hahazo reconnaissance iRajoelina ka mandraisa position ianareo mouvance Ravalomanana, tao amin’ny Carlton io.
Koa tsy mahagaga ny zava-misy ankehitriny, raha nanaiky fotsiny ilay sori-dalana voaitsy izy no tena nahazendana.
Olana ho an’ny Frantsay sy ny justice et paix ny fiverenan’i Ra8, ireo no nanome torimarika fa tokony holavina indray io sori-dalana io ary tohizana ny FR Simao ilay manilika an’i Ra8, ary rizareo no hifanome tanana amin’i Andry, miaraka amin’ny Torkia sy Maorisy amin’ fanataterahana fifidianana, ny rosianina nandà.
Ny SADC dia tsy hihemotra amin’ny zavatra notapahina ny sommet des chefs d’Etats, izay organe faratampony eo amin’ny SADC io. Koa ny mety hitranga dia sazy farany tsy ho zaka intsony satria isika no afaka mivadibadika fa ny CI tsy hanao izany velively.
Ny résolution-n’ny UE ry zareo no aza adino â ! Aza adino fa ny UE no 1ère puissance économique et politique amin’izao fotoana ! Na manao ny ataony aza ny frantsay ao anatiny, raha mahay miray hina sy miasa ny vahoaka, diaspora, ets., tsy tafavaoka eo ireo sy ny asa ratsiny !
Misy antony matoa tao anivon’ny SADC mbola manao zavatra tsy dia miady laotra, kanefa raha mikasika ny raharaha malagasy, tsy afaka ny hanipaka ny soro-dalana navaokan’ny UE ry zareo.
Mazàva anie ny tian’ny SADC nolazaina ê ! Menatra amin’ireo olona namoky azy, sy nandeha nizara vola tany fotsiny ry zareo, ka na dia izany aza :
– Président Ravalomanana tsy maintsy mody
– Any Madagasikara no TOHIZANA ny fandrariana ary fanantanterahana an’ilay FDR, satria tsy maintsy HAHITSY.
– Hiarahan’ny malagasy samy malagasy mijery ny fanamboarana na ny fitantanana ny tetezamita ( antony lehibe hodian’ny prezidà koa ).
– Vita daholo izany rehetra izany, IZAY VAO MANAO SONIA DAHOLO; FIFANARAHANA VAOVAO IO!
Fantatra izao fa misy andian’olona ao MADAGASIKARA, NANAO NY TSY METY ANY KA MATAHOTRA FADIRANOVANA NY FIVERENAN’NY PREZIDA RAVALOMANANA. TSY MIARAMILA IHANY FA OLON-TSOTRA MPANAO PÔLITIKA NA TSIA ; ARY MISY VAHINY IHANY KOA !!!
Ny déclaration nataon’i Chataîgner, dia mitory na dia tsy mankasitraka laotra aza ny frantsay, fa na ho ela na ho aingana, dia tsy maintsy manaraka ny résolutions-n’ny SADC sy ny UE ny malagasy.
Rahoviana io ? Anjaran-tsika VAHOAKA no manao an’izay mety, mba ho TANTERAKA MALAKY IZANY FANIRIANA IZANY.
Fuite en avant ny an’i domelina sy ny miaramila. Tsara ry zareo nanao an’ireo fanambaràna ireo, fa dia hitam-poko sy hitam-pirenena izao fa ry zareo no tena FAHAVALON’NY VAHOAKA MALAGASY.
Ho sahy ve ny frantsay hidaroka an’i domelina, toy ny nataony tamin’i Gbagbo na Khadafi ????
Tsia ! Anjaran-tsika no miantso an’ny amerikana, na ny vondrona eraopeana !
Alohan’izany, tsy maintsy mangataka amin’ny Conseil de sécurité -n’ny ONU isika, mba handraisany ny adidiny, na dia hitsivalana indray aza ny frantsay !
Rehefa tsy misy mihetsika, dia chacun pour soi avy eo, advienne que pourra !
Ka io HETSIKA atao io no tena ilaina
1) voalohany indrindra TSARA FANTARINA
2) Tsy maintsy atao faran’izay haingana KOA, mba tsy hanana fotoana hiomanana na hanomanana zavtra hafa ny FATin’alika. Araka ny fahitako azy manokana aloha, dia miandry ny ataon’ny FAT foana isika vao manao zavtra fa tsy mba isika no manao initiative voalohany.
Hany manao izao sy izao ny FAT vao mikoropaka indray hoe izao ary no HAVALINTSIKA AZY.
Aoka hazava fa tsy misy vahoaka afaka ny hanao zavatra na fanambaràna mivantana any amin’ny UE na SADC izany, fa tsy maintsy Vondrona na Antoko Politika no manao izany !
Ny anjaran’ny vahoaka araka ny efa nampiakatra ny tansiaoko, dia tsy misy hafa tsy io RODOBE io ihany…..ANGAMBA , ary isam-paritra.
Tsy mba misy fifamaliana hevitra toy izao anie no tena olana eto e ! Toa samy mandeha samy mitady fotsiny daholo, dia mibararaka mitantara fotsiny ny ankabeazany !
Anefa asa izay hevitrareo aloha !
15 juin 2011 à 19 h 05 min
Izaho Bozy dia miray hevitra 10000% @ io lazain’i Ramalabary io.
Voafitaka ny gasy, ninoninona lazaina. Ary iny Gaborone sy Sandton iny amiko d toa nanamafisana re-tany rendanitra ny maha filohan’ny hat an’i TGV.
Solution d ny fanalana azy eo, fa jamais de la vie Dada rà tafaverina eo rà mbola ireo iany no eo.
Précédent Article précédent : Come back de Marc Ravalomanana, la peur bleue du côté des foza
Suivant Article suivant : Le compte à rebours commence pour tous les putschistes !